Chinese search engine Baidu bilawday madal-as-a-adeegga Blockchain
Chinese Rafaa web search Baidu ayaa u gaar ah blockchain-as-a-adeegga (BaaS) madal.
Iyada oo ku saleysan technology ee ay Baidu, madal furan oo dhigaya in ay bixiyaan inta badan ku “user-saaxiibtinimo” adeegga blockchain.
Sida laga soo xigtay website adag ee heegan ah, “Baidu Trust” ogolaanaya ka qaban oo Raadinta macaamil, oo waxaa lagu saleyn karaa xaaladaha kala duwan ee loo isticmaalo, oo ay ku jiraan lacagta digital, biilasha digital, maamulka bangiga credit, maamulka caymiska hanti dhawrka lacageed, iyo in ka badan.
Foomamka dawladda Maraykanka group shaqeeya diiradda on cryptocurrencies
Xoghayaha Maaliyadda Mareykanka Steven Mnuchin ayaa sheegay in on Friday in Stability Council Oversight Financial, jirka ah dowladda oo qiimeeya khataraha nidaamka maaliyadeed, ayaa sameeyay koox shaqo oo diiradda on cryptocurrencies.
Mnuchin xusay on geedi socodka lagu jiro muuqaalka ah ee Club Dhaqaalaha ee Washington, D.C. ka dib markii la weydiiyay oo ku saabsan mawduuca of Seeraar.
“Waxaan aad diiradda on cryptocurrencies,” Mnuchin sharaxay, fiiqaya in ay wada hadal la nidaamiyo kale ee laga xoreeyo dalka ah. Dowladda oo mar dambe sheegaysa: “Waxaan rabnaa in la hubiyo in dadka xun uma isticmaali karo lacagaha si ay u sameeyaan waxyaalaha xun xun.”
Mnuchin ku daray in arrinta ay ahayd mid ka mid ah in laga xoreeyo dalka ah. Dowladda galaan lahaa kooxda heerka caalami ee G-20 iyo sidoo kale.
Mnuchin ayaa la weydiiyay hadii Reserve Federaalka ay u badan tahay in ay horumariyaan ay version digital gaar ah oo lacagta Fiat.
“The Caal iyo Uma maleynayo waxaa jira baahi loo qabo in markan,” Mnuchin yiri.
Russia ayaa Sberbank dhawaaqay shaybaarka blockchain
Sberbank, mid ka mid ah bangiyada ugu wayn ee Russia, ayaa ku dhawaaqay shaybaar blockchain si ay u horumariyaan iyo imtixaanka xal blockchain ku salaysan.
shaybaar cusub looga golleeyahay in ay curiyaan prototypes wax soo saarka, la sameeyo baaritaanno pilot oo loo hawlgeliyo xal ganacsiga blockchain ku salaysan Sberbank Group, war-saxaafadeed ku sheegay in.
Sida laga soo xigtay Igor Bulantsev, Madaxweyne ku xigeenka sare ee Sberbank, blockchain caawin kartaa in “eedeega” suuqa ganacsi lacageed, iyo sidoo kale hawlaha iyo adeegyada bangiga ee.
biilka saxiixa electronic Blockchain soo jeediyay in Tennessee
Xildhibaan A ee Tennessee ayaa xareeyay sharci cusub oo aqoonsan saxiixyada blockchain sida diiwaanka elektarooniga ah sharci, sixitaanka dadaal ugu dambeeyey ee sharci-dejinta inay sidaa sameeyaan toddobaadyadii la soo dhaafay.
Sharcigan, gudbiyaa Tennessee Golaha Wakiiladu by Xildhibaan gobolka Jason Powell on Jan. 10, axdiga uugu xabbadood la mid ah sharciga gudbiyay in Florida iyo Nebraska.
Laakiin sida la dadaallada ee Florida iyo Nebraska, waxaa weli la ogeyn sida xildhibaannada kale fal sidii tallaabooyin ka guuraan geedi socodka doodda.
bangiga Online Swissquote kordhisay ayaa faa'iido aragti ay sabab u tahay ganacsiga Seeraar
bangiga Online Swissquote dib loo eegay ay aragti faa'iido waayo, 2017, isagoo ka ganacsiga xoog faa'iideystey in cryptocurrencies. Shirkadda ayaa badiba xiiso for ganacsiga Seeraar.
Qanjirka ku salaysan Swissquote rajaynayo in dakhliga ku soo gala in ay ahayd 186 milyan oo faran Swiss ee 2018, 8 million ka badan waxaa la saadaalinayaa in ay saadaasha ugu dambeeyey. bangiga ayaa sheegay in ay soo bandhigi doonnaa faa'iido pretax ee ku saabsan 45 milyan oo faran, sida lagu sheegay war ay maanta soo saartay.
u kaca fiiqan ee dakhliga ku soo gala iyo faa'iido koritaanka ahaa sabab u ah laba arrimood, Swissquote yiri.
Macaamiisha baayacmushtari jireen si weyn u badan oo securities-ka iyo sarifka lacagaha qalaad, halka shirkadda kale oo ka faaiiday ka hordhaca ah ee ganacsiga cryptocurrency.
Swissquote ahaa bangiga Yurub ugu horeeyay ee online in aan bilowno qurbaan noocaas ah ee July, 2017.
Japan ayaa DMM Group oo bilaabay Seeraar sarrifka
DMM Group, shirkad ku salaysan Japan eCommerce iyo burburiyaha Internet waxaa bilaabay sarrifka cusub oo lagu magacaabo DMM Seeraar.
Shirkadda ayaa qorsheynaya qurbaan 24/7 taageero macaamiisha, iyo hadda waa newest nidaaminaya Seeraar sarrifka Japan.
Shirkadda waxaa si rasmi ah uga diiwaangashan tahay a ganacsade 'lacagta dalwaddii’ in Bureau Japan Maaliyadda
Post Previous:Seeraar Hardforks waa maxay haddayan?